दुबई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरु मध्ये एक आजकल - रेग्मी भ्रमण गर्दै
दुबई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरु मध्ये एक आजकल
दुबई र सडक सुरक्षा?
9 सक्छ, 2019
दुबईमा तपाईंको व्यवसाय स्थापित गर्न 14 उत्तम सानो स्केल बिजनेस विचार
दुबई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरु मध्ये एकजना आजकल!
दुबई - आजकाल सब भन्दा महत्वपूर्ण शहरहरु मध्ये एक। यो बीचको संयोजन हो आधुनिक, भविष्य र नवीन वातावरण र विविध जनसंख्या। यो एकै ठाउँमा धेरै फरक संस्कृतिहरू हेर्नको लागि अविश्वसनीय छ अरबी संस्कृति जान्नुहोस् एउटै समयमा। शहरमा अन्वेषण र रमाईलोको लागि धेरै ठाउँहरू छन्।
दुबई आइपुग्दा तपाईले देख्नु भएको पहिलो चीज हो दुबई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। संसारको सब भन्दा ठूलो र सबैभन्दा ग्लैमरस एयरपोर्ट मध्ये एक हो। म तपाईंलाई दिन सक्ने एउटा सुझाव भनेको मार्हाबा सेवा पुर्‍याउनु अघि बुक गर्नु हो। यो व्यस्त एयरपोर्टमा यो धेरै उपयोगी र मूल्यवान सेवा हो। यसले तपाइँको समय बचाउनेछ र तपाइँ पुग्न सक्ने भ्रमबाट बच्नुहुनेछ।
एक एयरपोर्ट सहायक तपाईंको आगमनमा गेटमा तपाईंको लागि पर्खनेछ र सबै एयरपोर्टको औपचारिकताहरूको हेरचाह गर्नेछ। तपाईंले बस आफ्नो राहदानी एजेन्टलाई दिन आवश्यक छ र ऊ वा उसले बाँकीको हेरविचार गर्ने छ, जबकि तपाईंसँग एयरपोर्ट अवलोकन गर्न र "दर्शनीय ठाउँ" लिन समय छ।
त्यहाँ धेरै टाढा दूरीहरू छन्, तपाईंलाई बग्गी कारको साथ प्रदान गरिनेछ, जसले तपाईंलाई आगन्तुकमा गेटबाट प्रख्यात इलेभेटरमा स्थानान्तरण गर्नेछ, जसले तपाईंलाई भन्सार र सामान दावी क्षेत्रमा लैजान्छ। यो लिफ्ट यति हो WW भावना छोड्ने आश्चर्यजनक, यसमा यात्रा गर्ने क्रममा किनकि यो यति ठूलो छ कि यसले 60 व्यक्ति लिन सक्दछ र यसमा पछाडि सुन्दर झरना पनि यसमा यात्रा गर्दा हेर्नका लागि हुन्छ।
सामान्यतया, भन्सारमा लाम लामो हुन्छ, किनकि तपाईंले पहिले आँखा स्क्यान गर्नु पर्छ र त्यसपछि त्यो राहदानी जाँच पछि। मार्हाबा सेवाहरूको साथ, तपाईं लामबाट भाग्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईंसँग प्राथमिकता छ एक विशेष तोकिएको क्षेत्र मा र अरू भन्दा छिटो पार। ब्यागेज दावी क्षेत्रमा पनि, त्यहाँ ट्रालीको साथ एक एजेन्ट हुनेछ, जसले तपाईंको झोलाको ख्याल राख्दछ, तपाईंलाई बाहिर निस्कनको लागि स्थानान्तरण गर्दछ, र गाडीमा तपाईंको लागि राख्नेछ, तपाईं चिन्ता बिना नै। यस सेवामा भिसा आइपुगे पछि जारी छ साथै र विशेष लाउन्ज जहाँ तपाईं प्रस्थान अघि फिर्ता मार्गमा आराम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए यो राम्रो टिप हो दुबई भ्रमण गर्दा दिमागमा हुनु विशेष गरी जब यो पहिलो पटक हो।
आज हामी यो शहर पत्ता लगाउनेछौँ र यसको वातावरण प्रकट गर्नेछौं
एक धेरै चाखलाग्दो क्षेत्र दुबई मारिना हो। एक क्षेत्र राम्रो रेस्टुराँ र बारहरू भरिएको छ एक सुन्दर होटल बुर्ज अल अरबको एक सुन्दर दृश्यको साथ। तपाईं विशिष्ट प्रयास अरबी विदेशी वातावरण महसुस गर्न सक्नुहुन्छ अरबी खाना खाँदा शीशा- स्थानीय स्वाद सहितको विभिन्न स्वादहरूका साथ।
पहिलो रमाइलो गतिविधि तपाईं सम्झना गर्नु हुँदैन मरूभूमिमा भ्रमण गर्दैछ। यदि तपाईं मरुभूमिमा जानु भएको छैन भने तपाईं दुबई जानु भएको छैन।
मरुभूमि सफारीले यस्ता गतिविधिहरू समावेश गर्दछ: बालुवामा बग्गी कारको साथ टिब्बा दिने। ऊँटको सवारी, रात्रिभोज गर्दै, बालुवामा तल विशेष कालीनमा बसिरहेका विशिष्ट अरब बेली नृत्य अवलोकन गर्दा - अविश्वसनीय कार्यक्रम जहाँ तपाईं मात्र दुबईमा देख्न सक्नुहुन्छ। सब भन्दा खतरनाक र सुन्दर नृत्य मध्ये एक नृत्य महिला आफ्नो हातमा तरवार सहित प्राच्य संगीतको तालको मुनि हो। उनी एक खेलौना जत्तिकै सहजसँग यससँग खेल्दै र नाचिरहेकी छिन्, तर एकै साथ पर्यवेक्षकलाई गम्भीर मुडमा राख्दै उनीहरूलाई यस प्रकारको भावनामा छोड्दै हुनुहुन्छ जुन समयको मेशिनमा छ। ती जादू अरब परिकथाहरूमा हस्तान्तरण गरियो।
उनी एक खेलौना जस्तो सहजसँग यससँग खेल्दै नाच्दै थिईन्, तर एकै समयमा पर्यवेक्षकलाई गम्भीर मुडमा राख्दै र उनीहरूलाई महसुस गर्न छोड्नु भनेको ती जादू अरब परीहरूमा स्थानान्तरण गरिएको समय मेशीनमा छ।
अन्य गतिविधि हेन्ना पेंटिtingsहरू हुन् - सुन्दर रेखाचित्र जुन सामान्यतया हात र कलाई मा बनाइन्छ। यो ट्याटु जस्तो देखिन्छ तर खैरो र withको साथ, जुन लगभग एक वा दुई हप्ता सम्म रहन्छ, यो तपाईं कसरी यसलाई व्यवहार गर्नुहुन्छ र कति पटक पानीमा पर्दा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया स्थानीय महिलाहरूले यसलाई गहना जस्तो लगाउँदछन् तिनीहरूको राष्ट्रिय पोशाकमा थपियो।
मरुभूमिमा धेरै पसल र बजारहरू छन्, जहाँ तपाईं स्मारिकाहरू र नर्तकहरूले लगाउने पोशाक किन्न सक्नुहुनेछ - यो दुई रंगका दुई टुक्रा पोशाकहरू छन् जसमा थोरै सुनौलो रंगको पेनी डिजाइन गरीएको छ, जसले नाच गर्दा शोर पैदा गर्दछ- विशिष्ट ओरिएंटल शैली। त्यो तपाईंको वार्डरोबमा मेमोरीको रूपमा रहन सक्छ। डेजर्ट सफारी एक अविस्मरणीय अनुभव हो जुन दुबई भ्रमण गर्न अवश्य गर्नुपर्दछ तपाई सजिलैसंग यस स्थानीय भाषाको कम्पनी डेजर्ट सफारी दुबई संग यो एडभेन्चर बुक गर्न सक्नुहुनेछ http://www.desertsafaridubai.com/ जहाँ तपाईं सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण प्रस्तावहरू र प्याकेजहरूको विभिन्न संयोजन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
संसारको सबैभन्दा ठूलो भवन बुर्ज खलीफा
अनिवार्य दर्शनीय स्थलहरूको लागि अर्को स्थान, अवश्य हो, संसारकै सब भन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा। यसको छेउमा रहेको फोहरा विभिन्न संगीत शैलीहरू र प्रकाश प्रभावहरूको ध्वनि अन्तर्गत सुन्दर नाच पानी हो। त्यहाँ धेरै रेस्टुरेन्ट, पसल र बारहरू छन् यस क्षेत्रमा जहाँ तपाईं अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ।
किनमेल मलहरू, त्यहाँ धेरै छन् तर सबैभन्दा लोकप्रिय हो दुबई मल र एमिरेट्सको मल्ल। एमीरेट्सको मल्लमा, तपाईं स्की क्षेत्र देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ तातो मौसमबाट बाहिर तपाईं मलमा स्कीइ experienceको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
दुबई मॉलमा सबैभन्दा ठूलो एक्वैरियम छ जहाँ तपाईं शार्क र अन्य विभिन्न समुद्री प्राणीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
किनमेल थोरै रमाईलो पनि हुन सक्छ। सबै स्टोरहरू र ठूला मल्लहरू बाहेक, त्यहाँ अरू लुकेका ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईं एक केहि अलि अलि फरक र अनैतिक तरीकाले शपिंग गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, हामी सबैलाई दोस्रो फिल्म सेक्स र शहरको दृश्य थाहा छ, जहाँ केटीहरू लुकेका पसलहरूमा जाली ब्रान्डको झोला किन्न जाँदैछन्। यो सहि छ - म लुकेका स्टोरहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। यी स्थानहरू हुन् जहाँ तपाईं साँच्चिकै देख्न सक्नुहुन्न किनकि ती भवनहरूका लागि भवनहरूमा अवस्थित छन्।
यदि तपाईं सडकमा विक्रेतालाई भेट्नु हुन्छ जसले तपाईंलाई लुकेको भण्डारमा हेर्नको लागि आमन्त्रित गरिरहेको छ, नडराउनुहोस् र हेर्न जानुहोस् र अनुभव गर्नुहोस् किनमेलको यो रोचक तरिका। र सम्झौता गर्न सम्झना !. विक्रेताहरू जबरजस्ती गर्न मनपराउँदछन्, त्यसैले तपाईंसँग वास्तवमै राम्रो बार्जि skills सीप हुनुपर्दछ अन्यथा तपाईं पैसाको एक हास्यास्पद रकम खर्च गर्न सक्नुहुनेछ नक्कली ब्रान्डमा।
हामी सबैलाई थाहा छ कती ग्लैमरस, अभिनव र चम्कि दुबई हो। तर पनि देश को युवा उमेर, यो देश को पनि एक इतिहास छ। तपाईं एक झलक लिन सक्नुहुन्छ र दुबईको पुरानो शहर अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जान तपाइँले डु a्गा लिनुपर्नेछ र नदी पार गर्नुपर्नेछ 1 वा2dirhams मात्र। यो एक अविश्वसनीय अनुभव हो किनभने यी डु boats्गा यति सानो र छोटो छन् कि यसमा यात्रा गरेको जस्तो लाग्छ तपाई जस्तोसुकै पानीमा खस्नुपर्दछ।
डु boats्गाले4वा5व्यक्तिहरू लिन सक्दछ र सामान्यतया त्यहाँ एक व्यक्ति छ जसले डु nav्गामा नेभिगेसन गर्दछ। जब तपाईं अर्को तर्फ पुग्नुहुन्छ तपाईं पूर्ण रूपमा विचित्र जादुई संसारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ - दुबई को पुरानो सोक। साना सडकहरू बजारले भरिएका छन्। तपाईको जीवनमा देख्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो विविधता र मसलाको प्रशस्तता। ठूला बोराहरू यति रंगीन मसलाले भरिएका छन्, तिनीहरू मध्ये केही अपरिचित र विदेशी पनि छन्। र हावाको गन्ध र गन्धबाट तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ कति मीठो र अतुलनीय छ जुन सँधै तपाईको दिमागमा कब्जा हुनेछ। यो अर्को ठाउँ हो जुन “अली बाबा र 40 चोरहरू” फेरीटाईलमा लैजान्छ।
यो जहाँ हाम्रो साहस समाप्त हुन्छ, तर यो शहरले अरू धेरै ठाउँहरू लुकाइरहेको छ त्यो अधिक आश्चर्यजनक र अन्वेषण गर्न घटनाहरू छन्। दुबई सब भन्दा चाखलाग्दो र हो विश्वका जीवन्त शहरहरू, जुन तपाईंले भ्रमण गर्नु आवश्यक छ।
दुबई शहर कम्पनी अब प्रदान गर्दै दुबईमा जीवनको लागि राम्रो गाईडहरू। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो दुबईको मार्गदर्शकहरूमा रोजगार। त्यसोभए यो कुरामा तपाईले संयुक्त अरब अमीरातमा आफ्नै भाषाको साथमा गाइडहरू, सुझावहरू र रोजगारी पाउन सक्नुहुन्छ।